सवा लाखको पहिरन लगाएर कुकुरको गरियो विवाह, ३५० भन्दा बढी जन्ती - Sidha News
एजेन्सी। मानिसहरुले आफ्नो विवाहमा धेरै खर्च गर्ने गर्छन् । विवाहमा महंगा सामान किन्ने र लगाउने पनि गरिन्छ । हामिले देखेको र सुनेकै छौ होला ! विवाहको पहिरनको लागि मानिसले महँगो मूल्य खर्च गर्छन् । तर के तपाइले कुकुरको विवाहमा ठुलो खर्च गरेको सुन्नु भएको छ ? अस्ट्रेलियामा कुकुरको विवाहमा पहिरनमै धेरै खर्च गरिएको छ।
विवाहमा कुकुरलाई महंगो पहिरन लगाइएको छ । अस्ट्रेलियाको मेलवर्न शहरमा भएको उक्त कुकुरको विवाह निकै रोचक थियो । पत्याउनु हुन्छ ? विवाहमा जेस्मिन नामको बेहुली कुकुरलाई १ लाख २७ हजार बढी मूल्यको पहिरन लगाइएको थियो।
त्यस्तै जेस्पर नामको बेहुला कुकुरलाई पनि महंगो शुट लगाइएको थियो । उक्त विवाहमा ३५० बढी मानिसहरु उपस्थित थिए । विवाह पार्टी पनि भव्य भएको थियो । विवाह गर्ने कुकुरको जोडी ७ वर्षदेखि प्रेमसम्बन्ध मा थिए । उक्त विवाह रेस्क्यु एंड अडोप्शन विक्टोरिया नामको सस्थाले आयोजना गरेको बताइएको छ।